China Rechargeable Battery Heated Glove Liner Thin Heated Gloves factory sy mpanamboatra | Eigday
Saron-tànana voafafa azo ampiasaina amin'ny batterie ary fonon-tànana miakatra nohafanaina
Avo: 65 ℃ / 150 ℉ 2-2,5 ora
Medium: 55 ℃ / 131 ℉ 3-3.5 ora
Ambany: 45 ℃ / 113 ℉ 6-6.5 ora
Fitaovana fonon-tànana Lycar, Neoprene
Votoatin'ny vokatra 1 * Liner vita amin'ny fonon-tànana manafana.2 * 7.4V / 2200 mAh Polymer Lithium Rechargeable batterie.
1 * Dual Charger bateria miaraka amina safidy US, EU, UK & AU.
Temperature fanafanana 40-60 ℃
Faritra fanafanana Mato-tanana sy rantsantanana dimy, rantsantanana dimy
Dingana 1: mandoa vola - Alefaso alohan'ny hividianana azy voalohany.
* Kitendry efijery mikasika
Tonga lafatra ho an'ny fanatanjahantena ety ivelany: Ny fonon-tànana fanafanana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy dia tonga lafatra amin'ny fanatanjahantena an-kalamanjana amin'ny andro mangatsiaka na mangatsiaka, indrindra amin'ny hazakazaka, bisikileta, fitsangantsangana, skating, filasiana, ski ambony ranomandry, jono, fihazana sns. Ary izany dia tsara kokoa ny manampy fonon-tanana fanampiny matevina any ivelany.
Teo aloha: CE fonon-tànana môtô nohavaozina miaraka amin'ny fiarovana ny nokleary
Manaraka: Ba kiraro nanafana SS01G